भोलि असार १० गते शुक्रबार, माता लक्ष्मीको कृपा कुन राशिमा रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
असार ०९, २०७९ MT
• मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) : –
मन शान्त रहनेछ। धैर्य गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आमाको सहयोग मिल्नेछ । व्यापार-व्यवसायमा थप मिहिनेत हुनेछ । असन्तुष्टिको अवस्था रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। जीवन कष्टदायी हुन सक्छ। काममा केही थप जिम्मेवारी आउन सक्छ। बोलीमा कठोरताको प्रभाव पर्न सक्छ। संचित रकम घट्न सक्छ।
आत्मविश्वासले भरिपूर्ण हुनुहुनेछ। मन अशान्त हुनेछ। शैक्षिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । क्रोध र आवेगको अत्याधिकता रहनेछ। आम्दानीका श्रोतहरु विकसित हुन सक्छन् । मिष्ठान्न खानेकुरामा रुचि बढ्नेछ। खर्च बढी हुनेछ । पारिवारिक जीवन कष्टकर हुन सक्छ। वैदेशिक यात्रामा जानुपर्ने हुनसक्छ ।
• मिथुन राशि – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) : –
मन शान्त रहनेछ। सन्तानको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। खर्च बढी हुनेछ । साथीभाइको सहयोगमा काम पाउन सकिनेछ । आशा र निराशाको भावना मनमा रहनेछ तर कुनै अज्ञात डरले सताउन सक्छ। मनमा क्रोध र तिर्खाका क्षणहरू रहनेछन्। अकादमिक तथा अनुसन्धान कार्यको फलदायी नतिजा आउनेछ । कममा उच्च पदाधिकारीसँग मतभिन्नता राम्रो हुन सक्छ।
• कर्कट राशि – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) : –
आत्मविश्वास प्रचुर मात्रामा रहनेछ। मन शान्त राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। आमाबाबु तपाईको साथमा हुनेछन्। व्यापार व्यावसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । स्वभावमा रिस उठ्न सक्छ । परिवारका ठूला व्यक्तिबाट धन प्राप्ति हुनसक्छ । कुनै अज्ञात डरले सताउन सक्छ। परिवारका साथ धार्मिक स्थलको यात्रामा जान सकिनेछ । खर्च बढी हुनेछ । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
• सिंह राशि – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) : –
अनावश्यक तर्कबाट टाढा रहनुहोस्। जागिरमा परिवर्तनको सम्भावना रहेको छ । सवारी साधनको आनन्द बढ्न सक्छ। आत्मविश्वासले भरिपूर्ण हुनुहुनेछ, तर आत्मसंयम रहनुहोस्। धैर्यता कम हुन सक्छ। पिताको साथ र सहयोग मिल्नेछ। कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको सम्भावना छ । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। तनावबाट टाढा रहनुहोस्।
• कन्या राशि – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) : –
संयमित हुनुहोस् धैर्य गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। शैक्षिक कार्यका लागि अन्य ठाउँमा जान सकिनेछ । साथीभाइको सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ । स्वभावमा रिस उठ्न सक्छ । सन्तानको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ । कुराकानीमा धैर्य राख्नुहोस्। बोलीमा कठोरताको प्रभाव पर्न सक्छ। परिवारमा धार्मिक कार्य सम्पन्न हुनेछन् । कपडामा खर्च बढ्नेछ । आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सावधान रहनुहोस्। व्यापारमा कठिनाइ आउन सक्छ।
• तुला राशि – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) : –
आत्मविश्वासको कमी हुन सक्छ। क्रोधबाट टाढा रहनुहोस्। व्यापारमा सचेत हुनुहोस्। कठिनाइहरू आउन सक्छ। साथीभाइको सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ । मनमा शान्ती रहनेछ तर पनि आत्मसंयम रहनु होला। क्रोधको मात्रा बढ्नेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। कपडा उपहारको रूपमा पाउन सकिन्छ। कार्यस्थलमा प्रतिकूल परिस्थिति रहनेछ। आम्दानीमा कमी आउनुका साथै व्ययको स्थिति बढ्नेछ । कार्यस्थलमा कठिनाइ आउन सक्छ।
• वृश्चिक राशि – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) : –
पढाइमा रुचि बढ्नेछ । शैक्षिक कार्यको सुखद नतिजा मिल्नेछ। विदेश यात्रा हुन सक्छ। कपडा आदिमा खर्च बढ्न सक्छ। संयमित हुनुहोस् अत्यधिक क्रोधबाट बच्नुहोस्। काममा अधिकारीसँग मतभेद हुन सक्छ। मनमा नकारात्मक विचारको प्रभाव रहनेछ । पदाधिकारीसँग मतभिन्नता हुन सक्छ। स्थानान्तरणको सम्भावना पनि छ ।
• धनु राशि – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) : –
मनमा शान्ति मिल्नेछ। परिवारमा क्रोध र विवादबाट टाढा रहनुहोस्। व्यापारमा ध्यान दिनुहोस्। कार्यक्षेत्रमा परिवर्तन आउन सक्छ । असन्तुष्टिको अवस्था रहनेछ। आलस्यको अति हुनेछ। पारिवारिक समस्याले सताउन सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सावधान रहनुहोस्। साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । पारिवारिक जीवन कष्टकर हुनेछ। जीवन अस्तव्यस्त हुनेछ।
कला वा संगीतमा रुचि बढ्न सक्छ। बौद्धिक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्छ। बौद्धिक गतिविधि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। मनमा नकारात्मक विचारको प्रभाव पर्न सक्छ । आत्मविश्वास कम हुनेछ। जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। जागिरमा परिवर्तन हुनसक्छ । कुराकानीमा धैर्य राख्नुहोस्। खर्च धेरै हुनेछ। आम्दानीमा बाधा आउनेछ । दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ ।
• कुम्भ राशि – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) : –
संयमित हुनुहोस् अनावश्यक क्रोध र विवादबाट टाढा रहनुहोस्। काममा कामको बोझ बढ्न सक्छ। जीवनसाथीको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । आमाको साथ हुनेछ। आक्रोशको मात्रा बढी हुन सक्छ। कपडाप्रति झुकाव बढ्नेछ। काममा उन्नतिको अवसर मिल्नेछ । वाहन सुखमा वृद्धि हुनेछ तर आत्मसंयम रहनु होला । आम्दानीमा कमी आउनुका साथै व्ययको स्थिति बढ्नेछ । परिवारको सहयोग मिल्नेछ ।
बोलीमा मिठास रहनेछ तर क्रोधबाट बच्नुहोला । परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अव्यवस्थित खर्च बढ्नेछ । रोकिएको पैसा फिर्ता हुन सक्छ। बोलीमा कोमलता रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा थप मिहिनेत हुनेछ । प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सन्तान सुखमा वृद्धि हुनेछ । कामको लागि यात्रामा जानुपर्ने हुनसक्छ। कार्यस्थलमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । यात्रामा जानुपर्ने हुन सक्छ।
प्रकाशित : बिहिबार, असार ०९, २०७९१७:०६
आज असार १० गते योगिनी एकादशी, भगवान विष्णुको कृपाले कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !